03/07/2018 - Page 4 sur 4 -
« Mpamotika zana-bahoaka »
Tsy mendrika ny antsoina hoe mpampianatra intsony ireny nanapa-kevitra ny hamotika ny fianaran’ny zana-bahoaka ireny. Rehefa tsy vonona ny hanao ny asany izy ireo, dia tokony omena tso-drano hiala sy hivadika asa hafa. Mbola misy …Tohiny
Rafaramalala Heriniaina Eulalie : Horaisin’ny Filoha eny Iavoloha
Ny alarobia 4 jolay ho avy izao (rahampitso) no horaisin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, eny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha i Rafaramalala Heriniaina Eulalie. I Eulalie moa dia tsy iza fa ilay tovovavy 16 taona nanavotra ilay zazakely …Tohiny
Raha toa ka efa navoakan’ ny governemanta tamin ‘ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana, dia efa taratra ireo izay ho kandida ary mihazakazaka mafy amin’ ny fitetezam-paritra maro samihafa. Mbola andrasan ‘ny be sy ny maro …Tohiny
Nanamafy ny minisitry ny Angovo Lanto Rasoloelisoa, fa tsy hisy fiakarany ny vidin’ny herinaratry ny Jirama amin’ity taona ity. Ezahan’ny fitondram-panjakana ny mitazona ny vidin-jiro mba hanala ny fahasahiranan’ny vahoaka na dia mivarotra fatiantoka aza …Tohiny